Fil d'actualités du 18/01/2018
18/01/2018 - 09:00 : FITATERANA: Mandrahona ny hitokona ny mpitatitra mampitohy an'Antananarivo dy Anjozorobe noho ny haratsian-dalana 30 km.
18/01/2018 - 08:45 : RAHARAHA HOUCINE ARFA: Mitaky ny hamoahana ireo niambina ity vazaha ity mpandraharahan'ny fonja miisa 3 ny sendika misy azy ireo.
18/01/2018 - 08:30 : SMM: Mangataka amin'ny Bianco ny hanokafana fanadihadiana lalina momba ny filazan'i Houcine Arfa fa nanolotra volabe ho an'ny Minisitry ny fitsarana, ny Tonian'ny mpampanoa lalana, ny Tale kabinetran'ny minisitra ny SMM.
18/01/2018 - 08:15 : NOSY MAORISY: Mandravarava ny rivo-doza Berguitta amin'izao fotoana izao, ka zavatra maro no efa potika ary tanana maro no efa dibo-drano.
18/01/2018 - 08:00 : RAHARAHA HOUCINE ARFA: Manimba tanteraka ary mandoto ny fitsarana ny fanambarana resaka kolikoly goavana nataony na marina na tsy marina, hoy ny sendikan'ny mpitsara na ny SMM.
17/01/2018 - 17:00 : RAHARAHA HOUCINE ARFA: Miantso ny rehetra ho tony ny praiminisitra ary nilaza fa hanao fanambarana tsy ho ela momba iny raharaha iny ny Tonian'ny mpampanoa lalana.
17/01/2018 - 16:00 : SYGMA: Lavin’ireto solontenan’ny mpiasa mivondrona ao amin’ny SYGMA ihany koa ny fanambarana fa nanodikodina vola mitentina 7OO tapitrisa ariary ny sekretera jeneralin ny sigma, izay vola avy amin’ny ITF.
17/01/2018 - 15:30 : FAMPIANARANA: Ho fanatsarana ny foto-drafitrasa eo amin’ny sehatry ny fanabeazana dia nametraka fanamby ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena amin’ity taona 2018 ity, fa efitra fianarana 2 054 no haorina ary 711 no havaozina, miampy fanorenana ivon-toerana fampianarana mamaky teny sy manoratra miisa 8.
17/01/2018 - 15:00 : ARIVONIMAMO: Tsy nisy kara-panondro vaovao intsony tany amin'ity distrika ity nanomboka ny taona 2013, ary tsy misitraka ny hetsika fizarana kopia sy fanaovana kara panondro izay tanterahin'ny fanjakana koa ny vahoaka hoy i Rakotomanjato Rodin solombavambahoaka voafidy tany amin'ity distrika ity.
17/01/2018 - 14:30 : SYGMA: Nanambara ireo mpiasa mivondrona ao amin’ny SYGMA(Syndicat General Maritime de Madagascar), fa ny filan-kevitra nasiônaly ihany no afaka manapa kevitra @ fanalana mpikambana, ary mpisoloky ireo mpiasa taloha izay mbola mitondra ny anaran’ity sendika ity.
Archive du 20161105
Zanatany Anglisy mandroso Ny an�ny Frantsay krizy lava
Harinkarena ambony sy tontolo politika milamina no hita any amin�ny ankamaroan�ireo tany nozanahan�ny Anglisy.
Minisitry ny fitsarana �Ny olona mihitsy no efa mafana ra�
Tany Antsirabe nandritra ny lanonana ofisialy nametrahana ny mpampanoa lal�na vaovao Rtoa Djaojoma Colette no nitondran�ny minisitry ny fitsarana Charles Andriamiseza fanazavana momba ny trangan-javatra niseho tato ho ato izay momba ny resaka fitsaram-bahoaka.
Riribe � Hifampihinana eto isika ny farany�
Nifarana omaly ny fiaraha-mivavaka ho an�ny firenena nataon�ny filohan�ny fikambanana zatovo sady mpanao politika, Rakotomalala Henri na Riribe sy ny namany
Taratasin�i Jean Karavasy vaovao
Ny Karana sy vazaha ary sinoa indray ve izany ry Jean no karavasy vaovao hamoretana ny tan�na eto amin�izao endri-panjanahana vaovao be apetrakareo izao ?
Rovan�i Manjakamiadana Mbola mistery ny mikasika ny mpandoro
Ampanjaka sy ny zanak�Andriana Miantso fanovana ifotony koa
Iaraha-mahalala fa maherin�ny 1 tapitrisa any amin�ny faritra atsimo no maty noana ary 95% ny Malagasy no mahantra ankehitriny, hoy ny filohan�ny fiombonamben�ny Ampanjaka sy ny zanak�andriana, raha naneho hevitra mikasika ny raharaham-pirenena tetsy Antaninarenina omaly.
Fitsaram-bahoaka 4 indray no maty tany Sambava
Nanamarika ity herinandro ity ny fitsaram-bahoaka saika nanerana an�i Madagasikara. Tsy mbola lefy laza ny tany Mananjary nandoran�ny olona ilay vehivavy nanota fady.
SECES �Tsy misy mandeha amin�ny laoniny eto�
Tsy takona afenina intsony ny fitotongan�ny fiainam-pirenena ka nahatonga ny SECES (Sendikan�ny mpampianatra-mpikaroka sy Mpikaroka-mpampianatra) nanao fanambarana sy fanairana.
Sendikan�ny mpampianatra SMM CRNFP Adino ny mpanabe
Mbola lal�na tany amin�ny taona 1960 hatramin�izao no tadiavina hampiharina eto, hoy ny tompon�andraikitra voalohany avy eo anivon�ny sendikan�ny mpampianatra Malagasy niofana tao amin�ny �centre r�gionale et national de formation professionnel� na ny SMM CRENFP, raha nivory niaraka tamin�ireo mpikambana tetsy Mahamasina io omaly io mba hanamboarana ny antontan-taratasy ho fanondrotana sokajy faha-4 ireo sokajy faha-3 teo aloha.
Finoana Jodaisma Madagasikara Mesirima Manampy hatrany ny mpiara-belona
Finoana iray anisan�ny manome lanja ny fiompiana sy ny fambolena ny Finoana Jodaisma Madagasikara Mesirima tarihin�i Cohen Bera.
Fanjakan�i Baroa !
Fitsaram-bahoaka sy fifamonoana izao no malaza. Mampametra-panontaniana hoe mbola Malagasy ve no miaina eto amin�ity firenena ity sa efa karazan�olona hafa? Fatratra amin�ny fitandroana ny hasin�ny aina isika saingy fiarahamonina lian-dra no misy ankehitriny.